ह्वावे आईसीटी अवार्ड २०२० ग्रान्ड फिनाले सम्पन्न - प्रबिधी खबर
December 28, 2020 by Prabidhikhabar
ह्वावे आईसीटी अवार्ड २०२० को ग्रान्ड फिनाले शनिबार सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना गरिएको थियो । यस प्रतिष्ठित अवार्डले १२ विभिन्न बिधाहरूमा विजेताहरूलाई सम्मान गरेको थियो । कार्यक्रम सीमित प्रतियोगी र अतिथिहरुको सहभागितामा आयोजना गरिएको थियो । यो कार्यक्रम नेपाल टेलिकम र जेनेस सोलुसनको सहयोगमा ह्वावे नेपाल द्वारा प्रायोजित, साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण द्वारा समर्थित र फोनेपे द्वारा संचालित थियो ।
माननीय संचार र सूचना प्रविधि मन्त्री पर्वत गुरुङ, पूर्व विज्ञान, र प्रविधि मन्त्री गणेश शाह, MOCIT सचिव हरि बस्याल र अन्य विशेष अतिथिहरूले कार्यक्रमको शोभा बढाइ दिनुभएको थियो । माननीय मन्त्री पर्वत गुरुङले भन्नुभयो, “हामीले रणनीति र फ्रेमवर्क बनाउनु पर्छ र निजी तथा सार्वजनिक लगायत सबै क्षेत्रले सँगै मिलेर काम गरी आईसीटी क्षेत्र निर्माण र बृद्धि गर्न आवश्यक छ ।” उहाँले थप्नु भयो कि प्राबिधिक विज्ञहरूको सूची तयार गरेर सरकार प्रविधि विस्तार गर्न र डिजिटल नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन चाहन्छ । गणेश शाहले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क पास गरिसकेको छ र आईसीटी अवार्डजस्ता कार्यक्रम सो लक्ष्यसम्म पुग्न एक राम्रो प्लेटफर्म हो । MOCIT का सचिव हरि बस्यालले पनि आयोजक टोलीप्रति र आईसीटी क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने यस कार्यक्रमका सहभागीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।
ह्वावे आईसीटी अवार्ड २०२०, १२ विभिन्न बिधाहरूमा प्रस्तुत गरिएको थियो । ह्वावे आईसीटी अवार्ड २०२० ले यस बर्ष ३५० भन्दा बढी अनलाइन नामांकन प्राप्त गरेको थियो साथै निर्णायक सल्लाहकारहरूबाट पनि नामांकन प्राप्त गरेको थियो । ह्वावे आईसीटी अवार्ड २०२० मा १४ जूरी सदस्यहरू र बराबरीको निर्णायक सल्लाहकारहरू थिए । ह्वावे आईसीटी अवार्ड २०२० को विभिन्न बिधाहरू मध्ये स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड्स, प्रोडक्ट आईसीटी अवार्ड्स, राइजिंग स्टुडेन्ट आईसीटी अवार्ड र एनसेल इनोभेसन आईसीटी अवार्ड्स मा चयन भएपछि घोषणा गरिएको थियो । डिजिटल एजुकेसन, डिजिटल गवर्नेन्स आईसीटी अवार्ड्स पायनियर आईसीटी अवार्ड, उद्यमी आईसीटी अवार्ड्स, नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्ड, महिला आइकन आईसीटी अवार्ड र मिडिया पर्सन आईसीटी अवार्ड २०२० का विजेताहरु पनि घोषणा गरिएको थियो ।
आयोजक समिति, जूरी र सल्लाहकार समितिले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अथक प्रयास गरेको थियो । यस पटक गत वर्ष भन्दा तीन गुणा बढी नामांकन प्राप्त भएको थियो र चयन प्रक्रियाको लागि चार महिना खर्च गरिएको थियो । २५ वोटा भन्दा बढी जूरी बैठकको गठन गरिएको थियो । धेरै जसो निर्णायक चयन प्रक्रिया र बैठकहरू इन्फरमेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर सञ्चालन गरिएको थियो ।
“चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन प्रविधिको प्रयोग भएको नेपालमा यो पहिलो पटक हो र यो सबैका लागि अनुकरणीय छ,” जूरी संयोजक सुशील पोखरेलले भन्नुभयो ।
विभिन्न बिधाहरूका लागि विजेताहरू निम्नानुसार थिए:
आईसीटी अवार्ड (पुरस्कारको नाम) पुरस्कार विजेता
स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड क्रीप्टोजेन नेपाल प्रा. लि.
प्रोडक्ट आईसीटी अवार्ड सीपीएफडीएस एण्ड केवाइसी व्यवस्थापन
राइजिंग स्टुडेन्ट आईसीटी अवार्ड सन्चै छौ
एनसेल इनोभेशन आईसीटी अवार्ड पाइला इमर्जेन्सि रीससिटेटर
डिजिटल एजुकेसन अवार्ड बुढानीलकण्ठ स्कूल
डिजिटल गवर्नेन्स आईसीटी अवार्ड आन्तरिक राजस्व विभाग
पाइनियर आईसीटी अवार्ड नीलकण्ठ उप्रेती
उद्यमी आईसीटी अवार्ड विनय बोहरा
नेपाली डायस्पोरा आईसीटी अवार्ड गौरवराज उपाध्याय
महिला आइकन आईसीटी अवार्ड तिमिला यामी थापा
मिडिया पर्सन आईसीटी अवार्ड किरण आचार्य
जूरी मेन्सन आईसीटी अवार्ड हाम्रो स्वास्थ्य
विजेताहरु मध्ये कोही अधिक प्रशंसा र पुरस्कारको हकदार थिए । क्राइप्टोजेन नेपाल प्रा. लि. ले धेरै कम्पनीहरूमा साइबर सुरक्षा सुसज्जित गरी सूचना सुरक्षामा काम गरेर स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड जितेका थिए । सीपीएफडीएसले एन्टि मनी लाउन्डरिंग सोलुसनको लागि प्रोडक्ट आईसीटी पुरस्कारको शीर्षक हात पारेको थियो । नेपालमा १८ वटा बैंकिङ र वित्तीय संस्थाले यो सोलुसन प्रयोग गर्दै आएको थियो । “सन्चै छौ” ले दैनिक जीवनशैली सुधार्न स्वास्थ्य परामर्श सम्बन्धी अनुप्रयोग विकास गरेर राइजिंग स्टुडेन्ट अवार्ड जीतेको थियो । पाइला इमर्जेन्सी रीससिटेटरलाई कोभिड–१९ को अव्यवस्थाको क्रममा अस्पतालहरूमा क्रिटिकल भ्यान्टिलेटरहरू प्रदान गरेर नेपाली बजारमा इनोभेसन ल्याएकोले एनसेल इनोभेसन ड्रिभेन क्राइसिस रेस्पन्स अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
यस वर्ष वुमन आईसीटी अवार्ड एक नयाँ थपिएको बिधा थियो जुन प्राध्यापक तिमिला यामी थापालाई प्रदान गरिएको थियो । उहाँले सरकारलाई शिक्षामा लगानी गर्न र ऋण दिन अनुरोध गर्नुभयो र आईसीटीको महत्वमा पनि ध्यान केन्द्रित गरी रु. १ को लगानीले करोडौंको आम्दानी हुने बताउनुभयो ।
यस कार्यक्रमको एक प्रमुख प्रायोजकको रूपमा ह्वावेले अतिथि र सहभागीहरुबाट राम्रो राय प्राप्त ग¥यो । गणेश शाहले ह्वावेलाई ग्लोबल अग्रणी आईसीटी सोलुसन प्रदायक मात्र नभई २० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा दिदै आएको योगदानको लागि पनि सराहना गर्नुभयो । हरि बस्यालले ह्वावेलाई यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा पनि धन्यवाद दिनुभएको थिया,े जसले आईसीटी क्षेत्रको सुधार गर्ने प्रविधि निमार्ण गर्ने तर्फ बाटो देखाउँदछ । यस कार्यक्रम र नेपालको आईसीटी क्षेत्रलाई समर्थन गरेकोमा र जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक भएकाले माननीय मन्त्री पर्वत गुरुङद्वारा ह्वावे नेपाललाई विशेष टोकन प्रदान गरिएको थियो ।
ह्वावे नेपालका सीईओ विलियम झाङ्गले आईसीटी अवार्डसंग मिलेर काम गर्न पाउँदाको खुशी पनि व्यक्त गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो कि ह्वावे विश्वको अग्रणी टेक कम्पनी भएर आईसीटी क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्राको सम्मान गर्न र नेपालको टेक क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । उहाँले विश्वका विभिन्न देशहरूमा आईसीटी क्षेत्र विकास गर्दाकोे ह्वावेको अनुभव पनि व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले सबै आईसीटी सरोकारवालाहरुसँग नेपालमा डिजिटल ल्याउने र डिजिटल संसारबाट नेपालमा सबैलाई फाइदा पु¥याउने ह्वावे नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
पुरस्कार विजेताहरूले के पाउँछन्?
ह्वावे आईसीटी अवार्ड २०२० का विजेताहरूले विशेष सम्मान, शिल्ड र थप प्राप्त गर्नेछन् । यस बर्ष स्टार्टअप आईसीटी अवार्ड, प्रोडक्ट आईसीटी अवार्ड, राइजिंग स्टुडेन्ट आईसीटी अवार्ड र इनोभेशन ड्रीभेन क्राइसिस रेस्पन्स आईसीटी अवार्ड २०२० को विजेतालाई नेपाल सरकारको स्टार्टअप कोष अन्तर्गत रु. ५० लाखको सहुलियत ऋण सुविधा प्रदान गरिने छ ।
बैंकिंग साझेदार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रु. १० लाख सम्म अनाधिकृत सहुलियत ऋण सुविधा प्रदान गर्नेछ । इनोभेशन ड्रीभेन क्राइसिस रेस्पान्स आईसीटी अवार्डका विजेताले एनसेल मार्फत विशेष नगद पुरस्कार (३००,०००) प्राप्त गर्नेछन् ।
एसोसिएसनमा रहेको नेपाल टेलिकमले एक बर्षका लागि सबै विजेताहरूलाई उच्च स्पीडको “फाइबर टु द होम” सेवा प्रदान गर्ने छ । ह्वावे नेपाल – शीर्ष प्रायोजकले टप ५लाई निःशुल्क क्लाउड सेवाहरु प्रदान गर्नेछ र जेनेस सोलुसन्सले ५,००० डलर मूल्यको अमेजन वेब होस्टिंग सेवा विजेताहरुलाई प्रदान गर्नेछ । इ–सेवाले उनीहरूको व्यवसाय एकीकरण र प्रमोशनमा निःशुल्क सहयोग गर्नेछ । साइबर सुरक्षा पार्टनर एमिनेन्स वाइजले साइबरसुरक्षाको लागि आवश्यक सर्पोट प्याकेजहरू प्रदान गर्नेछ । थप रूपमा विजेताले अन्य सेवा र सुविधाहरू पनि प्राप्त गर्नेछ ।
ह्वावे सबै विजेताहरूलाई बधाई दिदै, आईसीटी अवार्डको टीमलाई आईसीटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न मिलेर काम गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ ।
लाओसमा पहिलो स्मार्ट एक्सप्रेसवे निर्माण गर्न ह्वावेको सहयोग